Yusuf Garaad: Kulammadeyda Maanta ee Nairobi
Waxaan xusay in biseyl siyaasadeed oo ka muuqdo shacabka Soomaaliyeed marka la eego doorashada Madaxweyne Farmaajo iyo sida loo soo dhoweeyay. Sidoo kale in Baarlamaanku uu cod aan kala har lahayn ku taageeray Ra'iisal Wasaare Xasan Kheyre.
Ugu dambeyntii waxaan xusay in ay Dowladdu diyaar u tahay la xisaabtanka ka yimaada Dowlad ama Ururkii toos ula macaamila Dowladda Soomaaliya iyo hey'adaheeda kala duwan.
Aakhirka waxaan xusay in Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ay xoojineyso Adeegga Habmaamuuska Qaran, ayna ku soo dhoweyneyso Danjiyarayaashu in ay ka faa'iideystaan iyaga oo dhowraya Axdiga Vienna ee Xiriirka Diblomaasiyadda ee 1961 oo qoraya in Safaarad kastaa ay la shaqeyso ama ay u sii marto shaqadeeda Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka ay martida u tahay.
Jawaabaha su'aalo dhinacyo badan la iga weydiiyay ka dib, wadahadalku wuxuu ku dhammaaday jawi saaxiibtinnimo.
Kulammada waxaa badankood goobjoog ka ahaa Sii hayaha Safaaradda Soomaaliya ee Nairobi, Cali Maxamed Shiikh kulanka Norway waxaa isaga goob joog ka ahaa Mustaqiim Wayd oo ka tirsan Xafiiska Ra'iisal Wasaaraha.
Posted by Yusuf Garaad at 17:55:00